Mumiriri weUS asangana padyo nemabhinya kuMkomazi National Park
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba kwekushanya » Mumiriri weUS asangana padyo nemabhinya kuMkomazi National Park
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mumiriri weUS kuMkomazi National Park
Mumiriri weUS kuTanzania aive neruzivo kamwe-mu-hupenyu - parizvino zvakadaro - paakashanyira Mkomazi National Park kuchamhembe kweTanzania. Ikoko akauya akasangana-kumeso neiyo chipembere nhema chisingawanzoitika, yepedyo zvikuru yaakange ave padyo nechero chipembere.
Zvipembere zvidiki zvakasara zviri kugara zvakachengetedzwa kuMkomazi Park, inozivikanwa nekuchengetedza zvipembere kuEast Africa.
Tanzania National Parks chiremera chakagadzira nzvimbo dzekuona mupaki iyi kubvumidza vashanyi kuti vaone zvipembere zviri padyo padyo.
Iyo paki yakambogara iri kure uye isingasvikike kubvira pakagadzwa muna 1951, asi ikozvino iri kukwevera vashanyi kunzvimbo yayo muPare neUsambara Eastern Arc Mountains.
Mumiriri weUnited States kuTanzania, Dr. Donald Wright, vakashanyira Mkomazi National Park iri kuchamhembe kweTanzania iyo yakapa mufaro mukuru apo yakasangana nechipembere chitema chemuAfrica, mhuka yemusango isingawanikwe uye inovhimwa zvakanyanya.
Mumiriri weUS anga abhadharira kushanya kwemazuva maviri ku Mkomazi Park, iyo inozivikanwa nekuchengetedza zvipembere muEast Africa. Pano, zvipembere zvidiki zvakasara zvinosara zvichidzivirirwa ne Tanzania National Parks (TANAPA) mukati kubatana nemasangano epasi rese ekuchengetedza mhuka.
Mkomazi Rhino Park yakakwezva kufarira kwaDr Wright, Mumiriri weUnited States achangobvumidzwa kuTanzania, uyo akati zvinomufadza sezvo yaive nguva yake yekutanga kuona zvipembere padhuze kudaro. Tanzania National Parks chiremera chakagadzira nzvimbo dzekuona mupaki iyi kubvumidza vashanyi kuti vaone zvipembere zviri padyo padyo.
Mumiriri weAmerica Mumiriri weAmerica akafanotaura kuti mukurumbira weMkomazi Rhino Park uchave padanho rinotevera mumakore mashoma anotevera uye vangave nevashanyi vazhinji vanobva kumatunhu akasiyana epasi vachiuya kuzoshanya.
Mkomazi National Park, ine mukurumbira inonzi "Musha kune Rare Mhando," inzvimbo yakanaka yemhuka yemusango muAfrica inosvika makiromita mazana matatu nemazana mashanu emakiromita ePare akatarisa Gomo reKilimanjaro, pakakwirira pakakwirira muAfrica. Gomo reKilimanjaro rinogona zvakare kuonekwa kubva kuPaki zvinoenderana nemamiriro ekunze ezuva iri.
Iyo paki yakambogara iri kure uye isingasvikike kubvira pakagadzwa muna 1951, asi nzvimbo inochengeterwa zvipembere munzvimbo yayo yakanaka paPare neUsambara Eastern Arc Mountains, yava kudhonza vashanyi.
Mushure mekushanya, Dr. Wright akavimbisa kukurudzira vanhu veAmerica kuti vashanyire paki uye vaine vimbiso yekuti achadzokera ikoko zvakare.
Pamwe chete ne Tsavo West National Park muKenya, Mkomazi Rhino Park inoumba imwe yenzvimbo dzakakura uye dzakakoshesesa dzakachengetedzwa muEast Africa ne Africa zvakajairika. Inowanikwa makiromita 112 kumabvazuva kweguta reMoshi mumakomo eGomo reKilimanjaro.
Zvirongwa zvakasarudzika zvevatema vemuAfrica zveRhino zvakatangwa kudzivirira zvipembere zvinozadza kuMkomazi mumakore makumi maviri apfuura. Zvipembere zvitema zvaifamba-famba zvakasununguka pakati peMkomazi ne Tsavo ecosystem, ichifukidza Tsavo West National Park muKenya. Pamwe chete ne Tsavo, Mkomazi inoumba imwe yenzvimbo dzakachengetedzeka pasi rese.
Mexico Tourism Yakarwadziswa neUS-Isina Kukosha Kufamba ...
Lake Powell Inonyangarika: Zvinosuruvarisa kutashanyi!
3200-kilometre trek inotangazve Slow Tourism
Cote d'Ivoire inosimbisa yekutanga Ebola kesi muna 25 ...
American inozivisa nendege itsva dzeColombia, Mexico neUS ...
Vatungamiriri veNauru nePalau vakasaina ASA, nyowani ...
Kurwiswa kushamisika kuHawaii neChina neRussia, iyo ...
Tanzania vashanyi vekushanya vanoburitsa kapeti tsvuku ye ...
Usaende kuSpain, Portugal, Cyprus, Cuba ...
Hawaii inoyambira vashanyi nezvekurangarira zvigadzirwa zvezuva
China Tourism Nhepfenyuro 2.36 Bhiriyoni Dzimba Dzenharaunda mu ...
Wizz Air CEO £ 100 Miriyoni Bhonasi Riles Unions
GTRCMC Rubatsiro rwuri munzira yeHaiti Tourism Kudzoreredza
JetBlue inozivisa ndege dzeNew York neBoston kubva ...
Yega Island Rudzi rusina Coronavirus icharamba ...
IATA: Yakasimba Yekutanga Hafu-Yegore Mhepo Cargo Kukura Kubva ...
Zvifambiso zvekufamba neNyika neRegion zvinoenderana ...
Iyo bhenefiti yekusarudza otomatiki invoicing system